Gadzirisa dambudziko neiyo terminal muDolphin, muPlasma 5 | Kubva kuLinux
Gadzirisa dambudziko neiyo terminal muDolphin, muPlasma 5
Mune ino posvo (yakati ipfupi, nenzira) ini ndicharatidza maitiro ekugadzirisa dambudziko ratingaunze kana Dolphin (iyo KDE faira maneja) isingade kuratidza inoiswa midzi, iyo inobvumidza kushandiswa kwemirairo mune yazvino dhairekitori. yemaneja maneja pasina chikonzero chekutendeukira kune imwe terminal emulator.
Izvi zvakamuka kubva pachokwadi chekuti ndakafunga kukwidziridza yangu Archlinux kubva pa32-bit kusvika pa64-bit (x86 kusvika x64) uyezve shandura ku "KDE 5" (plasma 5), ​​saka kana chirongwa chapera, ndakavhura Dolphin uye ini ndakawana kushamisika kusiri kunakidza, iyo terminal haina kuratidza uye zvese zvakaonekwa mune grey kwazvinofanira kuve. Saka:
Saka ndakafunga kuti raive dambudziko mune rimwe pasuru rinoshandiswa neDolphin nechinangwa ichi, saka ndakatsvaga paInternet ndikawana iri peji raitaura nezvePlasma 5: http://alien.slackbook.org/blog/kde-5-plasma-5-2-0-available-for-slackware-current/.
Mune zvakataurwa paive nevashandisi vaive nematambudziko akafanana uye vakataura nezve inotevera package: «yakuake»; Ndakaona kuti iri KDE terminal emulator uye ndicho chirongwa chinoshandiswa neDolphin kuratidza chiteshi chayo. MuArchlinux aya mapakeji maviri anoda kuiswa:
pacman -S yakuake konsolepart4
Mushure mekuzviisa, tangazve Dolphin uye iyo inogumirwa terminal inofanirwa kuratidzwa sepakutanga:
Ndinovimba yakubatsira, kunyanya avo vari kuchinja kubva KDE4 vachienda kuPlasma 5, sezvo yekupedzisira ichine mamwe matambudziko asi inoshanda zvirinani kupfuura vhezheni yechina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Gadzirisa dambudziko neiyo terminal muDolphin, muPlasma 5
Kugona chose! Yakashanda zvakakwana.
Ini zvakare ndinowana fungidziro yekuti dambudziko rine chekuita nekusanganisa shanduro dzeDolphin neKonsole. Iye zvino ndine Manjaro uye ndine Dolphin kubva kuKDE 4.X akateedzana uye Konsole kubva kuKDE 5.X akateedzana. Pamwe kana Dolphin yakagadziridzwa padivi peKonsole, iro dambudziko harioneke.
Ini ndinotaura izvi nekuti ndisina Yakuake, iyo yakadzika midzi inogara ichindishandira. Uye ini ndakamhanya kupinda muchinetso icho pamberi apo apo pachinzvimbo chekuvandudza iyo sisitimu yese ndakafunga kungo gadziridza Dolphin, semuenzaniso. Pandinogadziridza Konsole padivi peDolphin, dambudziko rakagadziriswa (isina Yakuake).
Zvisinei, ini handizive kuti ruoko rwuri kuuya sei panguva ino, nekuti Yakuake anonyatso gadzirisa dambudziko.
Pindura kune lesco
Ndiri kufara kuti wakashanda. Nezve iyo Konsole vhezheni, zvinogona kunge iri kupokana pakati peshanduro, zvingangoita muDolphin 5.x ivo vachagadzirisa dambudziko, nekuti kunyangwe Yakuake akagadzirisa dambudziko, rinogona kukundikana mune ramangwana shanduro dze KDE, nekuti sezvandakaona pane peji rerojekiti (https://extragear.kde.org/apps/yakuake), Yakuake haasati aivandudza kubvira 2012. Asi ikozvino, chimwe chinhu chimwe chinhu.
chaishayikwa chaive konsolepart4 sezvo iyo konsole vhezheni iyo yakaiswa ndiyo kde 5 vhezheni uye dolphin ichiri iyo kde 4 vhezheni 🙁 ndinovimba munguva pfupi inotevera mamwe ese maficha achasvika ku kf5
Iniwo ndinofunga zvakafanana, asi ini handina kukwanisa kuzvisimbisa nekuti Yakuake uye konsolepart4 vanoenderana pane mumwe nemumwe paachaiswa muArchlinux
ndine hurombo asi kwete chete kutsamira kwekonsolepart4 mune arch ndiko kunotevera
chimwezve chinhu Yakuake iri kutove kuendeswa ku kf5
Hongu, chiGerman ndizvozvo. Ini ndangoburitsa Yakuake paManjaro uye zvese zvichiri kushanda mushe. Ipapo zvese zvaunofanirwa kuita ndeizvi:
sudo pacman -S konsolepart4
Tine hurombo, pane chero munhu anoziva kugadzirisa vhidhiyo zvigunwe uye kusangana pamwe nedropbox mu dolphin ine kde 5?
Edza kuisazve mapakeji aya: ffmpegthumbnailer uye kdemultimedia-ffmpegthumbs. Zvakaitika kwandiri nebhokisi rematte, asi mu dolphin hazvina kuitika kwandiri.
Zvekuti kana chinyorwa chine akanakisa ekushandisa X zvikamu? Yekupedzisira ndeyemakore apfuura.
Valmir Duartte akadaro
Pindura Valmir Duartte
Zuum A309W Zvimiro
Zvimiro zveZuum N9330